waxaa ka dhacday maanta Hotel-Xamda Xaflad qado-sharaf ah oo uu Xafiiska Caafimaadka DDSI ku sagootinayeen wasiir kuxigeenkii xafiiska Dr Yuusuf maxamed oo waxbarasho loogu Diray dalka Holland. - Cakaara News
waxaa ka dhacday maanta Hotel-Xamda Xaflad qado-sharaf ah oo uu Xafiiska Caafimaadka DDSI ku sagootinayeen wasiir kuxigeenkii xafiiska Dr Yuusuf maxamed oo waxbarasho loogu Diray dalka Holland.
Jigjiga(CakaaraNews) talaado Sept 10,2013.Munaasabadan oo ay ka soo qaybgaleen Madaxweyne kuxigeenka DDSI ahna Waasiirka Caafimaadka DDSI Mudane C/fataax maxamuud Xasan,Madaxa unicef u Qaabilsan DDSI Dr Willis ooma,Gadh-wadeenada wasaarada caafimaadka,Madaxda Hay'adaha iyo Dr C/casiis Ibraahin oo Dhawaan soo dhameeyay Takhasuska Qaliinka Indhaha horena u ahaa wasiir kuxigeenka wasaarada Caafimaadka DDSI si lamidana uu Dr Yuusuf Goobjoog ka ahaa xiligii Dr C/casiis XafladaSagootiska loo Qabanayay.
Dhamaanba madaxda Deegaanka iyo kuwa deeqda bixiya oo ka hadlay Munaasabadan ayaa xaqiijiyay in Dr Yuusuf uu ahaa Nin aad xilkas u ah,Dulqaad badnaa,cadaali ahaa,hal-abuur shaqo lahaa kana go'nayd in uu ka midho dhaliyo Yoolasha iyo Himilooyinka Qorshayaasha Guud ahaan Dalka gaar ahaana DDSI.
Mid ka mida Madaxda wasaarada Caafimaadka DDSI oo ka hadlay kaalintii iyo waxqabadkii Dr Yuusuf ayaa ku muusanaabay Anigoo ugu hambalyaynaya Dr Yuusuf Fursada waxbarasho ee uu helay hadana Anigu ma fasaxeen hadaan Awoodo waayo waanu tebi doonaa kaalintii Dr.ka ayuu yidhi.
Dr Yuusuf ayaa u mahadnaqay Madaxweyne kuxigeenka Ahna wasiirka Caafimaadka,Madaxda Donorska,Shaqaalaha xafiiska Caafimaadka iyo Shacabka deegaanka mudadii uu xilka hayay Sida fiican ula shaqeeyay la'aantoodna u suurto gasheen.
Sidoo kale dr yuusuf ayaa kula dardaarmay xafiiska caafimaadka in laga midho dhaliyo MDG iyo Barnaamijka dibudejinta oo uu heer fiican uu soo gaadhsiiyay,isagoona balanqaaday in uunan marna ka xagal daaci doonin meelkasta oo uujoogaba Doorka kaga aadaan Horumarka iyo Adeegyada Bulshada.